Ofi Kaiafa Abusua Mu | Adesua
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bicol Bulgarian Catalan Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Ga Georgian German Greek Greenlandic Guarani Haitian Creole Hiligaynon Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kazakh Kikuyu Kinyarwanda Kirghiz Korean Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Malagasy Malay Maltese Ndebele Ndonga Nepali Norwegian Nzema Oromo Pangasinan Polish Portuguese Quechua (Ayacucho) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sranantongo Swahili Swati Swedish Tagalog Tahitian Thai Tigrinya Tsonga Tswana Turkish Twi Ukrainian Uzbek Venda Vietnamese Wolaita Xhosa Yoruba Zulu
Ɛtɔ bere bi a wɔn a wotutu fam hwehwɛ tete nneɛma mu hu biribi a ɛkyerɛ sɛ obi a Bible ka ne ho asɛm tenaa ase ankasa. Sɛ yɛbɛyɛ nhwɛso a, afe 2011 mu no, Israelfo nhomanimfo huu biribi a edi adanse sɛ Bible mu nipa bi tenaa ase, na wɔde too gua. Na ɛyɛ adaka fɛfɛɛfɛ bi a wɔakora so mfe 2,000; wɔde obi a wawu nnompe na egu mu.
Nea wɔakyerɛw wɔ adaka no ho ni: “Miriam, Maasia sɔfo Kaiafa a ofi Beth ′Imri babarima Yeshua babea.” Bere a wodii Yesu asɛm kum no no, na Yuda sɔfo panyin Kaiafa di mu akoten. (Yoh. 11:48-50) Abakɔsɛm kyerɛwfo Flavius Josephus kae sɛ ɔno ne “Yosef a wɔsan frɛ no Kaiafa” no. Ɛbɛyɛ sɛ na adaka no yɛ ne busuani bi dea. Na wɔadi kan ahu adaka no bi dedaw a wosusuw sɛ ɛyɛ ɔsɔfo panyin no ankasa dea. Na wɔakyerɛw ho Yehosef bar Caiapha, anaa Kaiafa babarima Yosef. * Enti ɛbɛyɛ sɛ na Miriam yɛ Kaiafa busuani.
Israel asoɛ a ɛhwɛ tete nneɛma so bɔ amanneɛ sɛ wogyee adaka a Miriam nnompe wom no fii akorɔmfo bi nsam. Ná akorɔmfo no akɔfa afi ɔdamoa bi mu. Sɛ wohwɛ adaka no ne ɛho nkyerɛwee a, ɛda adi sɛ ɛyɛ Miriam dea ampa.
Miriam adaka no ma yehu biribi foforo nso. Ɛka “Maasia” ho asɛm. Ná Maasia ne asɔfokuw a ɛto so 24 a wɔsom wɔ Yerusalem asɔrefie hɔ. (1 Be. 24:18) Israel asoɛ a ɛhwɛ tete nneɛma so no kae sɛ nsɛm a egu adaka no ho da no adi sɛ “na Kaiafa abusua no ne Maasia asɔfokuw no bɔ abusua.”
Wohuu Beth ′Imri nso din wɔ adaka no ho. Asoɛ no kae sɛ ebia “Beth ′Imri yɛ asɔfo abusua bi din. Wɔn na wɔsan frɛ wɔn sɛ Imer mma no. (Esra 2:36, 37; Neh. 7:39-42) Na saa abusua no asefo ne Maasia asɔfokuw no.” Asoɛ no san kae sɛ ebetumi aba nso sɛ Beth ′Imri yɛ “baabi a Miriam anaa n’abusua fi.” Sɛ saa na ɛte oo, sɛ ɛnte saa oo, nea yenim ne sɛ Miriam adaka no ma yenya adanse a ɛkyerɛ sɛ nnipa a Bible ka wɔn ho asɛm no yɛ nnipa a wɔtenaa ase ankasa a na wɔda abusua mu.
^ nky. 3 Sɛ wopɛ adaka a wɔde Kaiafa nnompe guu mu ho nsɛm pii a, hwɛ Ɔwɛn-Aban, January 15, 2006, kratafa 10-13. N’asɛmti ne “Ɔsɔfopɔn a Obuu Yesu Fɔ.”